ko htike's prosaic collection: April 2009
ကျွန်တော့်ကို မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် မေးခွန်း တစ်ခု မေးလာတယ်။ ကျွန်တော်က များသောအားဖြင့် အဲဒီ မေးခွန်းအဖြေကို မဖြေဖို့၊ တတ်နိုင်လျှင် အဲဒီကိစ္စကို မသိချင်ယောင် ဆောင်ဖို့ ကြိုးစားတာပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီ မေးခွန်းရဲ့ လိုချင်တဲ့ အဖြေ ရနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပြီး လက်တွေ့ပုံစံနဲ့ ရနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပမ်းစား ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ (ကိုယ်ရောက်နေရာ နိုင်ငံ သေးသေး၊ လူနည်းနည်းလေးမှာတောင်) လိုချင်သလို အဖြေမရဘူး ဆိုတာကို သိနေသလို ခံစားနေရပေမယ့် ကိုယ့်ဘာသာ ငြင်းချက်ထုတ်၊ ဟန်လုပ် ခဲ့တာများနေတာပါပဲ။
အခုတော့ ကိုယ် တိုင်က သူများမေးတာကို ဖြေရမယ့် ကာလ ဖြစ်လာတော့ ရှောင်လို့ မရ၊ အဖြေမှန်နဲ့ ဝေးကွာလို့ မရ၊ လိမ်လို့ မဖြစ်(ကိုယ်ကို ကိုယ်လည်း မလိမ်ချင်၊ သူများကိုလည်း မလိမ်ချင်) ပါဘူး။ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ အဖြေလည်း ပေးဖို့ မသင့်တော်ဘူးလေ။
အဲဒီ မိတ်ဆွေ မေးတဲ့ မေးခွန်းကတော့ ......
“တိုင်းပြည်အတွက် အလုပ် လုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ တစုတစည်း တညီ တညွတ်တည်း အတူတူ အလုပ် လုပ်လို့ မရနိုင်ဘူးလား” .. တဲ့။
ဒါပေမယ့် အဲဒီ မေးခွန်း အတွက် ဒီတခါ ကျွန်တော့်မှာ အဖြေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အဖြေကတော့ ...
“အားလုံး အဲလို ညီညွတ်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မဖြစ်နိုင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ... လက်တွေ့ကျကျကို ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တခုပဲ ကျွန်တော်တို့ သေချာ စဉ်းစားရမှာကတော့ .. မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ရအောင် လုပ်ရမယ့် ကိစ္စက အဲဒီလို အားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ် လုပ်ဖို့ ကိစ္စထက် ပိုပြီး လွယ်လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အရင်ဆုံး မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ရအောင် လုပ်သင့်တယ်။ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ရပြီးမှ ပြည်ပရောက် နိုင်ငံအတွက် အလုပ် လုပ်ကြသူတွေ အားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ် လုပ်မယ့် ကိစ္စကို လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖေါ်ကြတာပေါ့ ..ဗျာ” လို့။
ကဲ .. ကျွန်တော် ဖြေတာ မှားသလားတော့ မသိဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲလို ခံစားတွေးမြင်မိတာကို ဖြေခဲ့ပါတယ်။ လက်တွေ့ကျကျ အလုပ် လုပ်ကြရအောင်လားဗျာ။
Posted by ကိုထိုက် at 16:53 13 comments
အနုပညာ လက်ရာမြောက် မြန်မာ့ ရသ စာပေများကို မြန်မာပြည်သားများ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် မြန်မာနှစ် ၁၃၇၁ ခုနှစ်၏ နှစ်စ နှစ်ဆန်း တရက်နေ့တွင် ကောင်းကင်(နိုင်ငံပြု အနုပညာ မဂ္ဂဇင်း) (www.kaungkin.com) အွန်လိုင်း မဂ္ဂဇင်း စာမျက်နှာတစ်ခုကို ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း သိရှိရသဖြင့် မြန်မာ့ ရသ စာပေ ချစ်သူများကို အသိပေး အပ်ပါသည်။ မဂ္ဂဇင်း၏ အာဘော် အဆိုအရ .....
“ဂလိုဘယ်ဖြစ်စဉ်ကြီးထဲမှာ ဥာဏ်ပညာနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမချို့တဲ့ တဲ့ မြန်မာများအဖြစ် စီးမျောနိုင်ရေး အတွက် ......
ဒါဟာအားလုံးအတွက် အားလုံးရဲ့ ကောင်းကင် ဆိုတာပါပဲ။”
Posted by ကိုထိုက် at 00:120comments
ကဗျာ စာအုပ်လေး တစ်အုပ် လက်ဆောင်ရလို့ ဖတ်မိလိုက်ရင်း ကြိုက်မိတဲ့ ကဗျာလေး တပုဒ်ဖြစ်သလို၊ ရာသီကာလနဲ့ရော မြန်မာပြည်ဌာန နဲ့ပါ ကိုက်ညီလို့ ပြန်လည် ဝေငှလိုက်ပါတယ်။ ကဗျာရဲ့ နာမည်က
သူ့အိုးနဲ့ သူ့အမည် ထိုးထားတဲ့ ပရိတ်အိုးတွေမှာ
ချည်ကြိုး၊ မြေဇာမြက်၊ သပြေရွက်၊ အုန်းရွက်
ဆီဆူး၊ နနွင်းလူးဆန် မေ့မကျန်ရဘူး
သူခူးတာ ကိုယ့်မျှ၊ ကိုယ်ရတာ သူ့ပေး
မူးအောင်၊ ဝေအောင်၊ မောအောင်၊ ပန်းအောင်
ဖျားအောင်၊ နာအောင်၊ ခေါင်းကိုက်အောင်၊ နှလုံးတုန်အောင်
ဘီလူး၊ ဂုမ္ဘာန်၊ နဂါး၊ အစိမ်းသရဲ၊
သွင်းကွဲ၊ ပြိတ္တာ၊ တစ္ဆေ၊ မြေဘုတ်ဘီလူး၊
လား သုံးခါမြောက် အမေးထောက်တော့
မရှိတာကို နှစ်သက်ပါတယ် ဘုရား
မိန်းမ၊ ယောက်ကျား၊ ကလေး၊ လူကြီး၊
သံပုံးတီးကြ၊ မီးစကို လျှို့၊ ဖလားတွေခေါက်
အမှောင်မြေ ဝိုးတဝါး ရီတရော
(Picture from Htein Lin)
Just after new year
organized by elders
each withawater pot filled with
cotton threads, Bermuda grass, Eugenia leaves, coconut,
fronds, plum thorns, turmeric rice,
which are share among friends,
they come to the ceremony
"Do you like fiends, monsters, devil,
goblins, ghosts, ogres, evil spirits
that cause diseases, illness, headaches,
stomachaches, sorrows, despair, death
or don't you, you village folks?"
the questions is raised three times,
and the answer comes
In each and every home
men, women, young and old
bang on cans, bowls, trays, cups
the bang won't stop.
men or ghosts
taking to their heels in huge numbers .....
Posted by ကိုထိုက် at 23:410comments
ရိုးရာဓလေ့ပေမို့ 
သတိရနေဆဲ ငါ့မှာအမြဲ့။
ရိုးရာအစဉ်အလာကောင်းတွေ့ 
ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကြပါစို့။
တစိမ်းမြေတစိမ်းရေ့ 
မမေ့နိုင်တာကတော့ခက်တယ့်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆင်နွဲ့။
Posted by ကိုထိုက် at 08:570comments
CLANDESTINE NUCLEAR PROJECTS OF BURMESE JUNTA ALMOST COMPLETED
မြောက်ကိုရီးယား၊ နျူကလီးယားသိပ္ပံပညာရှင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရောက်ရှိနေ
တာဝေးပစ် ဒုံးကျည် ပစ်လွှတ်ရေး အစီအစဉ်ကြောင့်၊ ကမ္ဘာ့သတင်းမီဒီယာများက၊ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ အကြောင်း၊ ခေါင်းစည်းမဲကြီးများဖြင့်၊ ဖေါ်ပြနေချိန်မှာ၊ မည်သူမှဂရုမပြုမိဘဲ၊ မြောက်ကိုရီးယားသိပ္ပံပညာရှင်၊ နျူကလီးယား အတတ်ပညာကျွမ်းကျင်သူများ၊ ရာနှင့်ချီ၍၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရောက်ရှိနေပြီး၊ မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ အဏုမြူဓါတ်ပေါင်းဖို၊ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကြီးများတွင်၊ ပါဝင်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။
ပထမဆုံး အဏုမြူ ဓါတ်ပေါင်းဖိုကြီးအား၊ မေမြို့ (ခ) ပြင်ဦးလွင်မြို့ အနီးပါတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ ၂၀၀၁ခုနှစ်ကတည်းက စတင် တည်ဆောက်လျက် ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ အဏုမြူဓါတ်ပေါင်းဖိုကြီး၏ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ ထက်ဝက်ကျော်ခန့် ပြီးစီးနေပြီဟု သိရှိရပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ၊ တပတ်ရစ်စက်၊ ပစ္စည်းကရိယာ အဟောင်းများဖြင့်၊ တည်ဆောက်လျှက်ရှိပြီး၊ ကုန်ကြမ်းဖြစ်တဲ့၊ ယူရေနီယံ သထ္ထုများကို၊ မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ မြောက်ပိုင်း၊ လားရှိုးမြို့ အနီးပါတ်ဝန်းကျင်မှ၊ ထုတ်လုပ်ရရှိထားကြောင်း၊ သိရှိရပါတယ်။ အဆိုပါ ဓါတ်ပေါင်းဖိုအား၊ ထိန်းသိမ်း ကိုင်တွယ်နိုင်ရေးအတွက်၊ စစ်အစိုးရက၊ မြန်မာ စစ်အင်ဂျင်နီယာများကို၊ ရုရှားနိုင်ငံသို့၊ တသုတ်ပြီး တသုတ်၊ ပညာသင်များ စေလွှတ်၍၊ လေ့ကျင့် သင်ကြား ပေးနေကြောင်း၊ သိရှိရပါတယ်။
စိတ်မကောင်းစရာမှာ၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ မိဘ ပြည်သူများ၊ အပန်းဖြေ အနားယူရာ၊ “မေမြို့ (ပြင်ဦးလွင်)”၏ ဂုဏ် ဆောင်၊ “ပွဲကောက်” ရေတံခွန်၏ ရေ အရင်းအမြစ်ကို ပိတ်၍၊ ရေကာတာတခု တည်ဆောက်နေခြင်းပင် ဖြစ်ပါ တယ်။ အဏုမြူ ဓါတ်ပေါင်းဖိုရဲ့၊ ရေနဲ့ စွမ်းအင် လိုအပ်ချက်များအတွက်၊ ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနက၊ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်လျှက် ရှိရာ၊ တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်း ၅၀% ကျော်ပြီးစီးနေပြီဟုသိရှိရပါတယ်။
စတင်ဆောက်လုပ်ချိန်မှစ၍၊ မြေဖြိုမိုင်းဖေါက်မှုများကြောင့်အနီးရှိ၊ “ဟုန်ပန်း“ ကြက်မွေးမြူရေးစခန်း၊ မှကြက် များ၊ နေ့စဉ်အတုံးအရုံး သေဆုံးနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ စစ်အစိုးရအပေါ် ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့်၊ မြေဧက ပေါင်းမြောက်များစွာပေါ်တွင်၊ ကျပ်ငွေသိန်းပေါင်းများစွာ၊ အကုန်အကျခံခါ၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ၊ ကြက်မွေးမြူ ရေးစခန်းကြီး၊ တည်ဆောက်ထားပြီး၊ ဒေသခံပြည်သူများ၊ ရာနှင့်ချီ၍၊ အလုပ် လုပ်ကိုင်နေကြောင်း၊ သိရှိရပါ တယ်။ ယခု နောက်ဆုံး ရရှိထားတဲ့၊ သတင်းများအရ၊ အဆိုပါ ဟုန်ပန်း၊ ကြက်မွေးမြူရေး စခန်းကြီးကို၊ ပိတ်ပစ်ရန်၊ စစ်အာဏာပိုင်များက၊ အမိန့်ပေးထားကြောင်း၊ သိရပါတယ်။
ဒုတိယအဏုမြူဓါတ်ပေါင်းဖိုအား၊ မင်းဘူးရွှေစက်တော်အနီး၊ ငဖဲကျေးရွာနားမှာ၊ ရုရှားနိုင်ငံအကူအညီဖြင့်၊ ၅နှစ် အတွင်း၊ အပြီးတည်ဆောက်မယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ အဲဒီစက်ရုံအတွက်လိုအပ်တဲ့၊ ရေနှင့်စွမ်းအင်ရရှိရေးအ တွက်၊ မန်းချောင်းကိုဖြတ်၍၊ ရေကာတာတခု၊ တည်ဆောက်ရန်စီစဉ်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ( အောက်ခြေ ကျောက်စရစ်များ၊ မြင်ရသည်အထိ၊ ကြည်လင်အေးမြပြီး၊ ဘုရားဖူးများအတွက်၊ အမောပြေအပန်းဖြေစရာ၊ မန်းချောင်းရေဟာ၊ မကြာသောကာလအတွင်း၊ ပုံပြင်ဒဏ္ဏရီပမာ၊ တိမ်ကောပျောက်ကွယ်ရတော့မှာပါ။ )
တတိယအဏုမြူဓါတ်ပေါင်းဖိုအား၊ ရမည်းသင်းမြို့အနီးမှာ၊ မြောက်ကိုရီးယားအကူအညီဖြင့်၊ တည်ဆောက် မယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ အဲဒီဒေသတဝိုက်ရှိ၊ ရာပေါင်းများစွာသော၊ တောင်သူလယ်သမားများ၊ ရွှေကျင်သူများကို၊ စစ်တပ်မှ အတင်းအကြပ် ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေပါတယ်။ တချို့ကတော့၊ မိမိတို့ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက် လုပ်ကိုင်လာခဲ့တဲ့၊ လယ်ယာခြံမြေများကို၊ မစွန့်ခွာနိုင်ဘဲ၊ မရမက တွယ်ကပ်နေကြခါ၊ စစ်တပ်အမိန့် ကိုအာခံနေကြောင်း၊ သိရှိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယခုအခါ အဲဒီဒေသအဝိုက်မှာ၊ စစ်အစိုးရက၊ ပုဒ်မ-၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားပြီး၊ အာဏာဖီဆန်နေ တယ်လို့၊ အကြောင်းပြခါ၊ ပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်နေတာကြောင့်၊ အပြစ်မဲ့တောင်သူဦးကြီးများ၊ သေဆုံးဒဏ်ရာရ လျှက်ရှိနေကြပါတယ်။
စစ်ရေးအတွက် အဓိကရည်ရွယ်ပြီး၊ တည်ဆောက်နေတဲ့၊ အဆိုပါအဏုမြူဓါတ်ပေါင်းဖိုများဟာ၊ မြောက်ကိုရီး ယား၏တပါတ်ရစ်၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့် တည်ဆောက်နေခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ကျွမ်းကျင်မှု သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့၊ ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယား ပညာရှင်တို့၊ ကြီးကြပ်မှု၊အောက်မှ၊ မြန်မာစစ်အင်ဂျင်နီယာများ၊ တာဝန်ယူနေကြောင်း ကြားသိရပါတယ်။ လုံခြုံစိတ်ချမှုနဲ့ပါတ်သက်၍၊ တိုင်းသူပြည်သားများကို မည်သို့မျှ အာမခံချက် မပေးထားသည့်အတွက်၊ အထူးစိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ကောင်းပါတယ်။။
အရာရာမှာ လျှို့ဝှက်တတ်တဲ့၊ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ သာဓကတခုအဖြစ်၊ ပြောပြရရင်၊ စစ်အာဏာသိမ်းခေါင်း ဆောင်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေရဲ့၊ကြပ်ပြေးနေအိမ်မှ၊ အေလာ လေယာဉ်ကွင်းအရောက်၊ ထရပ်ကားတစီး အသာလေး၊ လွတ်အောင်မောင်းနိုင်တဲ့၊ မြေအောက်ဥမင်လှိုင်ခေါင်းကြီး၊ ဖောက်လုပ်ထားတာကိုသိရှိသူ၊ ခပ်ရှား ရှားပါ။ ကွယ်လွန်သူ၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းရဲ့၊ အမွှာညီအစ်ကိုတော်သူ၊ စစ်အင်ဂျင်နီယာညွှန်ကြား ရေးမှူး၊ ဗိုလ်ချုပ်တင်ထွန်း(ကွယ်လွန်)မှလျှို့ဝှက်စွာ တာဝန်ယူဆောက်လုပ်ပေးခဲ့တာပါ။ (မြေအောက်ဥမင် လှိုင်ခေါင်းကြီး၊ ဖောက်လုပ်စဉ်၊ လိုအပ်တဲ့ စက်ပစ္စည်းကရိယာများကို၊ ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနက၊ ထောက်ပံ့ပေး ခဲ့ပါတယ်။)
အဏုမြူ ဓါတ်ပေါင်းဖို၊ တည်ဆောက်ရေး စီမံကိန်း အပေါ်မှီပြီး၊ လတ်တလော အကျိုးအမြတ် ခံစားနေကြသူတွေ ကတော့၊ ဆည်မြောင်း တာတမံ တည်ဆောက်ခွင့် ရရှိနေကြတဲ့၊ ဆည်မြောင်းဌာနက အရာရှိကြီးတွေပါ။ မိမိတို့ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်လိုက်တဲ့၊ စီမံကိန်းတွေကြောင့်၊ ဒေသပတ်ဝန်းကျင် ဂေဟစနစ်ပျက်ယွင်းမှု၊ ရာသီဥတု ဖေါက်ပြန်မှု၊ ဒေသအတွင်းရှိ လုပ်သားပြည်သူများ၊ လယ်ယာမြေ၊ အိုးအိမ်စွန့်ခွာခဲ့ရမှုနှင့် အလုပ်အကိုင်မရှိမှုတွေကြောင့်၊ မိသားစုတွေ ဒုက္ခအမျိုးမျိုး တွေ့ကြုံခံစားနေကြရမှု၊ …စသဖြင့်၊ ကောင်းကျိုးထက်၊ ဆိုးကျိုးကများမှန်းသိရှိ နေသည့်တိုင်၊ လောဘ အသော မသတ်နိုင်တာကြောင့်၊ ပြည်သူ့ ဘဏ္ဏာများ၊ အလွှဲသုံးစားပြုပြီး၊ မိမိကိုယ်ကျိုးနဲ့၊ မိသားစုချမ်းသာဘို့၊ စစ်အစိုးရအလိုကျ စိတ်ပါလက်ပါ၊ တည်ဆောက်ပေးနေကြတာပါ။ အလွဲသုံးစားပြုထားတဲ့၊ ငွေကြေးတွေနဲ့၊ တိုက်တွေ တလုံးပြီးတလုံးဆောက်၊ သားသမီးတွေက၊ နိုင်ငံခြားအလည်သွား၊ ဈေးဝယ်ထွက်၊ အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန် နိုင်ငံတွေမှာ ကျောင်းတွေတက်နဲ့၊ ဆည်မြောင်း မိသားစုတွေ အပျော်ကြီး ပျော်နေကြပါတယ်။
အခုအဏုမြူဓါတ်ပေါင်းဖို၊ စီမံကိန်းတွေကို၊ တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်ပေးနေသူကတော့၊၊ လောလောလတ်လတ်ရာ ထူးတိုးပေးခံထားရတဲ့၊ အတွင်းရေးမှူး(၁)၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သီဟ သူရ တင်အောင်မြင့်ဦးပါ။ နိုင်ငံတော်ကို၊ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်အဖြစ် ဖေါ်ဆောင်ပေးပြီး၊ ပြည်သူတွေကို၊ ဘဝသစ်ဖန်တီးပေးမယ်လို့၊ အရှက်မရှိလိမ်ညာဝါဒဖြန့် ပြောဆိုနေခါ၊ လက်တွေ့မှာတော့၊ ပြည်သူတွေကို၊ ဘဝဆုံးအောင် စီစဉ်နေကြတာကို၊ ကမ္ဘာကသိအောင် ဖေါ်ထုတ်ရန်၊ လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ အသိပေးတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
CLANDESTINE NUCLEAR PROJECTS OF BURMESE JUNTA ALMOST COMPLETED.
(With full force of support by North Korean Technology and hundreds of Technicians)
While the whole world focus their attention on North Korean provocation of hostile Ballistic Missiles program with Medias reveal them in bold line letters, another involvements of North Korean Nuclear Technology are almost completed their projects in military rule Burma with full force of support by hundreds of North Korean Technicians and Technology but no one ever notice their rapid progress.
First project among other is located in the area of Maymyo (Pyinoolwin) and groups of villages were removed by force since year 2001. Construction of Nuclear Reactor in that area locally known as Kone-Baw village is almost completed. The most important raw material Uranium, require for Nuclear Project was founded in Lashio area of North-Eastern Shan State thus transportation is very convenience because the project site and Lashio are on the same road famously known in the old day called Burma-China road. It is also has easy access from port City of Rangoon to carry the old second-hand machinery and parts from North Korea. Training of technicians to run that reactor was commenced since year 2001. Groups of Army Engineering graduates were sent to Russia for further study.
Sad news for Burmese people are that the Pwe-Kauk water-fall originally known as BE fall in Maymyo, which remained as recreation centre for people almostacentury long was now blocked to build Dam to provide require irrigation system for Nuclear Project. Construction of Dam was undertaken by Irrigation Department and works was done for more than 50% of the project. Relocating of villages, cultivated area and even including Buddhist Temples and Monasteries were done by force of military authority and painful to the inhabitants because they all are staying in the area by generations. Impact to environments with demolition of local flora and fauna are not substitutable but permanent.
Persecuting of local communities by authority is not just stopped yet. The beautiful landscaping, watershed and catchments area important for local farmers and inhabitants were damaged by explosion of mines for irrigation project. Explosion of mine destroyed not only the natural heritage but also the life-blood of local people. Big poultry farm of international standard with higher technology own by native of the country’s business group was suffering the lost of many fowls dead by explosion every day. Instead of compensating or finding the alternative way to avoid the lost of properties, military authority issue the order to close the poultry farm. That will beabig waste of millions and millions of investment. That poultry farm is intending to educate the latest technology to local farmer for higher yield of poultry but now all are down to the drain. Furthermore, poor local workers employed by farm will face the hardship of unemployment problem in near future.
Second project was started in Magwe Division, Min-Bu district, near Nga Phae village adjacent to the famous Scared Foot Print of Lord Buddha Which is call in Burmese “Mann-Shwe-Set-Taw Pagoda”. That project was built and supported by Russian Government with agreement of completion in5years term. Project included the building of Dam on the scared and famous Mann creek. Mann creek is famous for crystal clear water that pilgrims of Scared Foot Print Pagoda can lodge on the bank of the creek and enjoy the scene of surrounding mountain ridges with flowing water of which can see through to the bad of the creek decorated with stone pebble naturally. All of those beautiful natural gifts will became fairy tale in next5years time.
Third project will be building in east of Ya-Mae-Thinn Township. Military authority starts giving the marching order to local inhabitants that those refuse to move or try to delay were encountered with shooting incident by soldiers. Military authority issuing the Civil Act Section (144) in that area means authorizing the soldiers with license to kill. For the local farmers, they are staying in that area by generations and their forefathers converted the raw land into the fertile and cultivated land so for them move away mean commencing of poverty and famine. List of dead and injury by shooting are mounting in the area.
All of above three projects shown clearly that requirement for energy and electricity are not eminent in the region of where the Nuclear Reactors were located. Almost all of the Industrial Zone are around in Rangoon area and which are the most needed places for electricity supply but all three Nuclear Reactors are not built nearby so intention of Nuclear projects are very clear that they are not for peaceful purpose. Wasting of people’s money in Junta’s paranoia of protection and safety only for them is something selfish and ridiculous. Junta’s paranoia is obvious that they built the tunnel from their resident to airport in Nay-Pyi-Daw using the so much amount of people’s money only for their escape from people’s justice.
Furthermore, how we can trust the secondhand materials and technology of North Korea with their technicians. Nobody can assure the reliability and ability of North Korean as no proof of reputation about them. If we are thinking deeper about the safety of nuclear accident, we are terrified with fears and scare. Russians are not much better as we still can’t forget the Chernobyl accident in 1985 at old Soviet Union.
Constructions of the Dams in all around the Burma by Irrigation Department were very irresponsible and non-considerate matters as that caused so many negative effects. Impact on ecological balance was so great and that cause irregularity in weather and environmental damages. Relocating of people and villages because of constructions and flooding of water catchments cause unemployment and lost of fertile land. An extinction of local flora and fauna are not replaceable. But those Irrigation Department engineers involved in constructions projects were rich and became millionaires. They make their fortune by misusing people’s money, stealing and accepting bribes from sub-contractors for keeping the blind eyes on unqualified works etc. They own one after another of big houses in posh area of Rangoon and in every big cities including abroad. They can send their children to get further education in USA and UK. They are the one kind of class in Burma as can only compete with generals in corruption.
The person in-charge for all those senseless projects was recently honored by Junta and was promoted to the post of full general. He can be proud of misusing people’s properties and obeying the order of uneducated brainless paranoid Than Shwe so he became three stars general. His name is Thiha Thura Tin Aung Myint Oo.
Thu Ye Kaung.
Posted by ကိုထိုက် at 21:230comments
ဘာရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး မေးလ်ထဲက တွေ့တာလေး မဖတ်ရသေးသူတွေ ပြုံးနိုင်အောင် ပြန်တင်လိုက်တာပါ။
၁၃၇၀ ပြည့်နှစ်၊ နှောင်းတန်ခူးလပြည့်ကျော် ၅ - ရက်၊ ခရစ်နှစ်၊ ၂၀၀၉ ခု၊ ဧပြီလ ၁၄ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့၊ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက်၊ စက် ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ် ၃၆ စက္ကန့် …..။
“ဗမာပြည်” အမည်ရှိသော ဗြဟ္မာမင်းဦးခေါင်းကို ကိုင်ထားသည့် သောကြာသားသည် အစိမ်းရောင် အဝတ်ကို ဝတ်ဆင်လျှက် အင်္ဂါသမီးထံ လွှဲအပ်ရမည့်အစား “ပေးဘူး၊ ပေးဘူး” ဟု အတင်း ကာရော ငြင်းဆန်ကာ ဆက်လက် ကိုင်ဆောင် ထားဦးမည် ဖြစ်သောကြောင့် မိုးတွင်းတွင် မိုးရွာလတ္တံ့၊ မိုးတဖြိုက် နှစ်ဖြိုက်ရွာရုံမျှဖြင့် ရန်ကုန်တွင် ရေကြီးအံ့၊ ထီပေါက်သူများ ပိုက်ဆံ ဝင်လတ္တံ့၊ လျှပ်စစ် မီးကြောင့်ဖြစ်သော ဓာတ်လိုက်ခြင်း အန္တရာယ် ကင်းဝေးလတ္တံ့၊ ကိုရီးယားကား လူကြိုက်များလတ္တံ့၊ အင်တာနက် ဆက်သွယ် ရေး နှေးအံ့၊ တိုင်းသူပြည်သားများမှာ ဆန်အစား ဆန်ကွဲကို စားရသောကြောင့် အစာကြေလွယ်အံ့၊ ညဘက်မီးမှန်မှန် ပျက်သောကြောင့် စောစောအိပ်ရာဝင်ရ လတ္တံ့၊ ခြင်အစရှိသော အတောင်ပါသော သတ္တဝါများ ပေါများသောကြောင့် ခြင်ထောင်မရှိသူများ ဂေါ်ဇီလာဖြင့် အိပ်ရအံ့။
သင်္ကြန်အခါရှောင်ကျဉ်ရန်အမှုများကား နိုင်ငံရေးတံဆိပ်များပါသည့် တီရှပ်ဝတ်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ ဤကား စစ်အစိုးရအလိုတည်း။
သင်္ကြန်အကျအလိုမူကား ကြောင်းလျားစုံစေ့ သင်္ကြန်နေ့၌ အင်းလျားလမ်းတွင် မဏ္ဍပ်ဝင်က၊ ကညာနှမ မြင်သမျှမှာ လှချင်တိုင်းလှ၊ ဗိုက်ပေါ်ခါးပေါ် ပေါ်ချင်သလို ပေါ်၍ တွေ့မရှောင်ငမ်း .. ကြမ်းရမ်းဂီတ ဖွင့်ကုန်ကြရင်း မျောက်လိုကကာ သောက်ထုတ်သေရက် ဤတချက်ကို လူ့ပြည်လူ့ခွင် လူကိုစင်ထား မြင့်မိုရ်ဖျားဝယ် သိကြားသော်မှ ခွက်ပုန်းချရ၏ .. သို့သော်မြန်ပြေ (ပြည်) ဆန်းသည့်မြေ၌ အရက်စတုဒီသာ ပေးနေပါ၍ သိကြားထက် ထူးသည့် ကုသိုလ်တည်း။ စတုဒီသာ ကုန်သွားပါက စပွန်ဆာရှာ၍ သောက်ပါလေ။
တနင်္ဂနွေသားသမီး (အေး) သည် - အနေအထိုင်မတတ်ပါက ရာထူးကျကိန်းရှိပြီး ကံဆိုးပါက ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခံရကိန်းရှိသည်။ ယတြာအနေဖြင့် သောကြာသား၏ အနားမှ တဖဝါးမှမခွာဘဲ ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ် ပြုစုကာ .. ကြာသပတေးနာမ်နှင့်ဆိုင်သော ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ပါလေ (ဥပမာ - ဖားခြင်း၊ ပေါင်းခြင်း၊ ပေါတောတော နေကာ ရူးချင်ယောင်ဆောင်ခြင်း)
တနင်္လာ သားသမီး (ကြိုင်) သည် - သောကြာသားသမီးကို ညွှန်ကြားနိုင်သော အရည်အချင်း ရှိပေသည်။ သူများ မသထာ ရေစာများ စားနေသောကြောင့် ထမင်းစားလျှင် မကြာခဏ နင်ကိန်းရှိသည်။ ယတြာမှာ အုန်းသီးတလုံးကို အခွံမနွှာဘဲ အာမထိလျှာမထိမြိုပါ။ အညံ့များ အားလုံး ကင်းစင်မည်။
အင်္ဂါ သားသမီး (စု) သည် - အရူးတသိုက်၏ ချုပ်နှောင်ထားခြင်း ခံရကိန်းရှိသည်။ ရူးနေသူများ ဖြစ်သောကြောင့် လွှတ်ပေးပြီးလျှင်လည်း ပြန်ဖမ်းကောင်း ဖမ်းနိုင်သည်။ ကြာသပတေးနာမ်ဖြင့် စသော နိုင်ငံရပ်ခြားမှ အကူအညီ ရချင်ရနိုင်သော်လည်း သောကြားသား အဖျက်ရှိသည်။ ယတြာမှာ “လုပ်ချင်တာသာ လုပ်ကြတော့ဟေ့” ဟု သုံးကြိမ်အော်၍ ဘာမှမလုပ်ဘဲ ငုတ်တုတ်ထိုင်စောင့်ပါလေ။
ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီး (ရွှေ) သည် - စိတ်မမှန်သော အထက်လူကြီးက မကြာခဏ ဟိန်းဟောက်ကာ မကြာခဏ ဆုလာဘ် ချပေးသောကြောင့် မကြာခဏ ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်တတ်သည်။ သားဖြစ်သူ တနင်္ဂနွေ သား၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ အထက်လူကြီး၏ မိုးလေဝသ အခြေအနေ ပေါ်တွင်သော် လည်းကောင်း အင်္ဂါနာမ် တခု ပေါ်တွင် လည်းကောင်း မူတည်နေသည်။ ယတြာမှာ ကုန်း၍ “ဆန်ရှင်မြန်မြန် ရုပ်မှပါပဲ” ဟု လိပ်ခေါင်း မထွက်မချင်း အော်ပါ။
ကြာသပတေး သားသမီး (မင်း) သည် - အရူးများ၏ နှိပ်စက်ခြင်းမှ မကင်းလွတ်နိုင်သေးပေ။ အညံ့ကာလ ဖြစ်နေသည်။ ယတြာမှာ အနောက်အရပ်ကို မျှော်ရင်း “သောကြာသား နင်သေမှ အေးမဟဲ့” ဟု သုံးကြိမ် အော်ပါ။
သောကြာသားသမီး (သန်း၊ သိန်း) သည် - ဘုရင်ရူးရူးနေသောကြောင့် ပလ္လင်ပေါ်မှ ဒလိန့်ကောက်ကွေး ကျကိန်း ရှိသည်။ ပေါင်းလျှင် ၃ ရသောနှစ်၌ ထူးထူးခြားခြား မဟုတ်တရုတ်လုပ်လိမ့်မည်။ လူအများ ပို့သသော မေတ္တာကြောင့် ကျန်းမာရေး အထူးကောင်းနေသေး သော်လည်း မကြာခင် ငေါက်ခနဲ သေကိန်းရှိသည်။ ယတြာမှာ တနင်္လာသမီး၏ ထဘီစကိုဆွဲ၍ ဆူးကြီးကြီး ဒူးရင်းသီတလုံးကို ပုံစံမပျက် မြိုပါ။
စနေသားသမီး (တေ) သည် - ပွဲလန့်တုန်းဖျာခင်းတတ်သော အရည်အချင်းကြောင့် ကြီးပွားကိန်းရှိသည်။ ကြာသပတေးနာမ်နှင့်ဆိုင်သော အလုပ်များ (ဥပမာ - ဖားခြင်း) အထူးကျွမ်းကျင်ပြီး အင်္ဂါနာမ် (ဆန်ရှင်) ကြောင့် လတ်တလော ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေသည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနာမ် အကြိုးပေးမည် (ဥပမာ - ပိုင်ဆိုင်သော လေယာဉ်တစီးစီး ရပ်နေရင်း ခါးမှ ထက်ပိုင်းပြတ်ကြိုးသွားခြင်း) ယတြာမှာ “အနောက်က ဆန်ရှင်ရင် အောက်က သစ်ခိုး ထုတ်မယ်” ဟူ၍ သက်တမ်းရင့် ကျွန်းပင်ကြီး တပင်ကိုဖက်ရင်း လည်ချောင်းကွဲသည်ထိ အော်ပါ။
သင်္ကြန်အတာ တက်အံ့သောအခါကား .. အမူးလွန်၍ အန်ဖတ်ဆို့သေကြသူများ၊ ရေနစ်၊ ရန်ဖြစ် ယာဉ်မတော် တဆဖြစ်၍ မာလက ဈာန်ကြွကြသူများ၊ ဆေးရုံရောက်သူများ၊ အကဲ လွန်သောကြောင့် ဗိုက်ထွက် ကြသူများ စာရင်း ထွက်ပေါ်ချိန်တည်း။
အတာဆန်းထူး နှစ်ဟောင်းကျူး၍ တန်ခူးလည်သည် နှစ်အမည်ကား ဇေယျနှစ်တည်း .. နှစ်ကို ၁ နှင့် ၃ ရှိထားပြီးဖြစ်သော ဖဲသမားစောင့်၏၊ လ ကို မီးပျက်သည့် ညတိုင်းစောင့်၏၊ ရက်ကို နှလုံးထီသမား စောင့်၏၊ မြေကို မြေပိုင်ရှင်စောင့်၏၊ ရေကို ရေစည်လှည်းတွန်းသူ စောင့်၏၊ မိုးကို တနွေလုံး ရေမချိုးရ သူများစောင့်၏၊ လူတို့၏အဓိပတိကား အရူး၊ ငှက်တို့၏ အဓိပတိကား လင်းတ၊ ငါးတို့၏ အဓိပတိကား ငါးရွှေ၊ အပင်တို့၏ အဓိပတိကား ကြက်ဆူပင်။
နက္ခတ် ၃ လုံး ငုတ်၏၊ ၄ လုံးပေါ်၏ ၃ နှင့် ၄ ကို တနှစ်လုံးမွေးထိုးက မနှေးအမြန် မွဲကိန်းမြင်၏။ မိုးရွာလျှင် ရေရအံ့၊ ခြင်ပေါအံ့၊ မြောင်းပုပ်နံ့ နံအံ့၊ ဝဲပေါက်အံ့၊ လူတို့ အနာအဖျား များသည့်အခါ အစိုးရမင်းများ၏ စေတနာကြောင့် ကိုယ့်ပိုက်ဆံနှင့်ကိုယ် ဆေးကုရအံ့၊ မကုနိုင်သူများ သေအံ့၊ ပြည်ရွာ မီးလောင်လျှင် မီးသတ်တွင်ရေမရှိသောကြောင့် ပြာဖြစ်အံ့၊ မြန်မာ့ လောင်းကစား ကမ္ဘာကိုလွှမ်းအံ့၊ ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများ ဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲအံ့၊ ထိုနှစ်ဖွားသော သားကား ကံဆိုးသောကြောင့် မြန်မာပြည်တွင်လူဖြစ်အံ့။
Posted by ကိုထိုက် at 12:260comments
Union of Burma Right Council
Posted by ကိုထိုက် at 12:150comments
Open Letter to SPDC from 88 Generation Students
Posted by ကိုထိုက် at 01:183comments
Posted by ကိုထိုက် at 16:135comments
ကိုရင် သာဂိ၏ မီဒီယာ မှတ်တမ်း ၁ (သို့) မှော်ဘီ နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့နှင်းသဘင်
“မီဒီယာကို မီဒီယာနှင့် တုံပြန်မည်”
နိုင်ငံတော် ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး ဗိုလ်ရှော်ဆန်း(ငယ်နာမည် ဂျပု ဂွတို)
အထက်ပါ ညွန်ကြားချက်နှင့် အညီ တိုးတတ်ခေတ်မီ နေသော မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးအား ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖျက်သမားများ၏ လိမ်လည် သတင်းမှားပေးကာ သိက္ခာချနေမှုများ တုန့်ပြန်နိုင်ရန် .. ကျွန်တော် မောင်သာဂိ တစ်ယောက် ကင်မရာလေး ကိုင်ကာ သတင်းသမား ပီပီ အပြေးအလွှားဖြင့် မှော်ဘီ ဘက်သို့ ဦးတည် ထွက်ခွာလာပါသည်။
နိုင်ငံတော် (အမှန်တော့ နိုင်ငံတော် ဆိုတာ ဘာကို ရည်ညွန်းမှန်း ကျွန်တော် မောင်သာဂိ တစ်ယောက် သိသည် မဟုတ်ပါ။) ၏ စစ်မှန်သော စေတနာများဖြင့် တံတားတွ ဖောက်လမ်းတွေ ဆောက်လုပ်ထားတာကြောင့် ဗိုက်ထဲ ကျောက်ခဲ ထည့်ထားလျင် ကြေညက်သွားစေနိုင်သော ကျောက်ခဲကြေလမ်းမကို ဖြတ်ကျော်ကာ မှော်ဘီ ဘက်သို့ တခေါက် ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော် မောင်သာဂိ သိသလောက် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများတွင် ယဉ်အန္တာရယ် ကင်းဝေးစေရန် အချို့သော လမ်းမများတွင် အရှိန်ထိန်းစေသော ကုန်းအမြင့်လေးများကို လမ်းမတွင် ထားလျက် ကားများအား ဖြေညှင်းစွာ မောင်းစေချင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ကြကြောင်း ကြားဖူးခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကုန်း အမြင့်လေးများ ပြုလုပ်ခြင်းမှာ ကတ္တာများ အပိုကုန်သဖြင့် နိုင်ငံတော် ဝင်ငွေများ အလကားဖြုန်းတီးရာ ကြသည် .. မဟုတ်ပါလား။ ထို့ကြောင့် အမြော်အမြင်ကြီးမားတော်မူသော တပ်မတော် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ လမ်းညွန်ချက်များနှင့် အညီ ကုန်းအမြင့်လေးများ မလုပ်ဘဲ .. လမ်းမတွင် ချိုင့်ခွက်ကြီးကြီးများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကားများကို ဖြေးညှင်းစွာ မောင်းနှင်စေကာ အရှိန်ဖြင့် မောင်းနှင်ချင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင် ယဉ်အန္တာရယ်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့လေသည်။ (အော် ..... နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲများ၏ ရွှေဥာဏ်တော် ပေါက်ရောက်ပါပေစွဟု .. တွေးလျက် ကြည်ညိုစိတ်များ တဖွားဖွားပေါ်နေပေတော့သည်။ )
ယခုလည်း ... ကမ္ဘာ့ အဆင့်မီလား .. ကမ္ဘာ့အဆင့် လွန်လား မသိ .. နည်းပညာရပ်များကို သင်ကြားပေးသော မှော်ဘီ ရပ်ရှိ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်၏ ဘွဲ့နှင်းသဘင် အခမ်းအနားသို့ တတ်ရောက်ကာ သတင်း ဓါတ်ပုံများ ဝေဝေဆာဆာဖြင့် သတင်းများတွင့် ထည့်လိုက်ရလျှင်ကား ပြည်ပမှ မီဒီယာ သမားများ ပါးစပ်များ ပိတ်လျက် “ဟာ...ဟင်” ဖြစ်သွားစေရန် ကျွန်တော် အပြေးအလွှား သွားရောက်နေသည် မဟုတ်ပါလား။
မှော်ဘီ နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းဝင်းထဲ ဝင်လိုက်လျှင်ပဲ ပူလောင်သော နွေရာသီတွင်ပင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အေးမြမြဖြင့် ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် သစ်ရိပ်ဝါးရိပ် ကောင်းကောင်းဖြင့် စီစဉ်ပေးထားသည်များက ... အလေ့ကျပေါက် သစ်ပင်များကို ဟိုတပင် ဒီတပင် နေရာတကာတွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။
အရိပ်ကောင်းကောင်းပေးနိုင်သော ခြေမျက်စိဖုံး မြက်ပင်များနှင့် ခြုံပုတ်များကလည်း တချို့မှာ နွေသရုပ်ကို ပီပြင်စွာ ဖေါ်လျက် ရွှေဝါရောင် သမ်းလျက် ခြောက်တချို့၊ စိမ်း တဝက်ဖြင့် ဝေဝေစာစာ အလှ ဆင်လျက်ရှိကြသည်မှာ .. ပုဂံခေတ်က မြကန်၏ သာယာပုံကို ရေးသော စာဆိုပင် အမွမ်းတင် ရေးနိုင်စွမ်းငှာ တတ်နိုင်မည် မထင်။ (ရေကန်လည်း မရှိ၊ လွင်တီးခေါင်ကို ဘယ်လိုလုပ် မြကန် စာဆိုက အမွမ်းတင်နိုင်ပါ့အံ့နည်း။)
ခြေတလှမ်း လှမ်းလိုက်တိုင်း တထောင်းထောင်း ထ နေသော ဖုံမှုံ့ များနှင့် ရီဝေဝေ မြင်ကွင်းက တစုံတခုခုကို သတိရနေသလိုပါပဲ။ ကဗျာ ဆန်ဆန်ပြောရလျှင်ဖြင့် ဖုံခိုး ဖုံငွေ့ ကြားမှာ လွမ်းမောဖွယ်ရာ အတိပေါ့။ (နှားခေါင်းကိုတော့ ကျန်းမာရေး အရ ပိတ်ထားရသည်က လွဲလျှင်။)
ကဲ .. ဆက်လေ့လာကြည့်ကြဦးစို့ရဲ့။ ....
မြန်မာပြည်ရဲ့ အနာဂါတ် သားကောင်းရတနာ ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များကို နောက်ဆုံး မွေးထုတ်ဂုဏ်ပြုတဲ့ အခမ်းအနားမှာ အခုလို သတင်းရယူဖို့ လာခဲ့ရတာကြောင့်လည်း ကိုယ့်ဘာသာ ဂုဏ်ယူလို့ ဆုံးပါဘူး။
ပြောနေကြာတယ် ဘွဲ့နှင်းသဘင် ကျင်းပရာ ခမ်းမဆောင်ကြီးကို လှမ်းကြည့်လိုက်ရအောင်။ အား .. ပါး .. ပါး .. ကြီးကျယ်ခမ်းနား တင့်တယ် လှပ လှသော ခန်းမဆောင်ကြီးကို အဝေးက လှမ်းမြင်လိုက်ရလျှင်ပဲ ....။ .......
...... စာဖတ် ပရိတ်သတ်တို့ မျက်စိထဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်အောင် ပြန်လည် ဖေါ်ပြရလျှင်ကား ရှည်လျှားကျယ်ဝန်းတဲ့ ခန်းမ ဆောင်ကြီးမှာ .. လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင် ပြုလုပ်ထားသော မျက်နှာကျတ်များက ခပ်မြင့်မြင့် .. ရှေ့ဆုံး အစွန်မှ တစ်ယောက်ယောက်က အော်လိုက်လျှင် နောက်ဆုံးမှ ထိုင်နေသော လူက ထိုအော်သံကို ကြားရဖို့ ခဏမျှ စောင့်ရသော ခန်းမကျယ် မျိုး၊
.... အခန်းနံရံများတွင် ကနုတ်ပန်းခက်များ၊ ကမ္ဘာကျော် ပန်းချီကားများ ချိတ်ဆွဲထားလျက် ခြေနင်း ကြမ်းပြင်ကား မဟော်ဂနီရောင် ပေါ်လစ် သုတ်ထားသော ပျဉ်းကတိုးသားဖြင့် ခင်းထားပြီး .
.... ခန်းမ၏ တံခါးဝတွင် လူရပ်လိုက်လျှင် အလိုအလျှောက် ပွင့်သွားစေသော တံခါးများ တပ်ဆင်ထားသော ခန်းမမျိုးအားမျက်စိနှင့် မြင်ကြည့်လျက်
.. ထိုခန်းမနှင့် ပြောင်းပြန် အချိုးကျမှုကို တွေးကြည့်ကြပါကုန်။ (မမြင်သေးလျှင် အောက်ပါ ဓါတ်ပုံကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)
အင်ဂျင်နီယာ ပညာရပ်များ၊ နည်းပညာများကို သင်ကြားပို့ချပေးနေသော ကျောင်းဖြစ်သည်နှင့် အားလျှော်စွာ နိုင်ငံတော်က ပေးသော လျှပ်စစ်မီးကို အားမကိုး၊ ကိုယ်ပိုင် ကျောင်းသားများ တီထွင်ထားခြင်း မဟုတ်သော မီးစက်စုတ် တလုံးဖြင့် အခမ်းအနားအတွက် လျှပ်စစ်ပေးနေသည်မှလည်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ပီသ ပါပေစွ။
ဘွဲ့ရယူပြီး ထွက်လာသော ပညာတတ် အကျော်အမော်များ ခေတ္တ ခဏ နားနေနိုင်ရန်နှင့် မိသားစုများ ခန်းမအပြင်ဘက်တွင် အနားယူသော နေရာကို .. သဘာဝ အဲယာကွန်း ရရှိနိုင်အောင် ဖုံ ထူထူ လွင်တီးခေါင်တွင် ပြုလုပ်ပေးထားနိုင်သည်မှာလည်း တိုးတတ်ခေတ်မီနေသော မြန်မာနိုင်ငံမှ လွဲလျှင် အခြားနိုင်ငံများတွင် ပြုလုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ဟု ကျွန်တော် မောင်သာဂိ အားရဝမ်းသာစွာ မှတ်ချက် ပေးမိပါသည်။
ကဲ .. ဒီလိုနဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ယူစရာ နေရာများကို လိုက်လံ ရှာဖွေ ကြည့်လိုက်သောအခါ .. သာဂိ တို့ ငယ်ငယ်က ရွာဦးကျောင်းနား နွားတင်းကုပ်သာသာ မြင်ကွင်းကို နောက်ခံထားလျှက် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ အမှတ်တရ ရိုက်ယူနိုင်ကြပါအံ့။ မြန်မာနည်း မြန်မာ့ဟန် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော် နှင့် လိုက်ဖက် ညီပေစွ။
ဒီလိုမျိုး အစစ အရာရာ ပြည့်စုံ ကောင်းမွန်နေသော မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး၏ ပညာတတ်လူငယ်များကို နိုင်ငံတော်က စေတနာ ရှေ့ထားပြီး ခမ်းခမ်းနားနား မွေးထုတ်ပေးနေသည်ကို မကောင်းပြောတတ်သော ပြည်ပ မီဒီယာများနှင့် အဖျက်သမားများအား မောင်သာဂိ တစ်ယောက်က
“ ... ကဲ .. မင်းတို့ ဘာပြောနိုင်သေးလဲ .. ” လို့သာ မေးခွန်း ထုတ်ချင်နေမိပါတော့တယ်။
Posted by ကိုထိုက် at 09:284comments